ဗဟုသုတ | Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
Gennie Carden - Male - United Kingdom - Powered By PHPFox
By sadyebynu 2862 days ago on ဗဟုသုတ from friendsmob.com
By sadyebynu 2862 days ago on ဗဟုသုတ from www.xfire.com
Track, message, and talk to your gaming friends, join them in games, browse servers, take screenshots and download patches.
Xfire supports over 2930 games including World of Warcraft, League of Legends, Call of Duty and Counter-Strike.
ဦးနှောက်၏ ထူးဆန်းသော အချက်များ
By jasmineaye 2955 days ago on ဗဟုသုတ from www.maukkha.org
- ဦးနှောက်သည် နာကျင်မှုကို မခံစားရပေ။ အခြားနေရာမျိုးစုံ နာကျင်မှုများအား ဦးနှောက်ထံ သတင်းပေးပို့ ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သော်လည်း ဦးနှောက်ကိုယ်တိုင် နာကျင်မှုကို ခံစား သိရှိရခြင်း မရှိပေ။
- ဦးနှောက်သည် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အောက်စီဂျင်နှင့် ကယ်လို ရီသုံးစွဲမှု စုစုပေါင်း၏ နှစ်ဆယ်ရာနှုန်းကို ရယူလျက်ရှိသည်
- ဦးနှောက်သည် ပြင်ပလေနှင့် ထိတွေ့မှသာ အစိုင်အခဲသဏ္ဌာန် မြင်ရလေ့ရှိပြီး ဦးခေါင်းခွံ အတွင်း လုံလုံခြုံခြုံ ရှိနေသည့် ဦးနှောက်မှာ အရည်များဖြင့် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ဖွဲ့စည်း ထားသော နူးညံ့သည့် အစိုင်အခဲ တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်လက်ကိုင်အိတ်တွင် အိမ်သာကဲ့သို့ ပိုးမွှားများ ကပ်ငြိနေနိုင်
By jasmineaye 2955 days ago on ဗဟုသုတ from www.swesonemedia.org
သင့်လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး အဆီ၊ ပေါင်ဒါမှုန့်ဘူးနဲ့ ငွေစက္ကူတွေအပြင် အိမ်သာထိုင်ခုံတွေမှာထက် ဘက်တီးရီးယားတွေ အများကြီး ကပ်ငြိနေတတ်ကြောင်း ယူကေရှိ သန့်ရှင်းရေး လေ့လာမှု အသစ်တစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။ လေ့လာသူတွေက ဟန်းဘတ်အိတ်၂၅ လုံးထဲက အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မျက်နှာပြင်ကို စမ်းသပ် လေ့လာကြည့်ခဲ့ရာတဲ့အခါ လက်ကိုင်အိတ်ရဲ့ အညစ်ပတ်ဆုံးအပိုင်းဟာ လက်ကိုင်တဲ့နေရာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်သာထိုင်ခုံထက် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ပိုမို ကပ်ငြိနေတတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဟန်းဘတ်အိတ် ငါးလုံးအနက် တစ်လုံးမှာ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ အလုံအလောက် ရှိနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။လက်ကိုင်အိတ်ကို ချလိုက်တဲ့ နေရာမှာ
ရှောက်သီးမှ ပေးစွမ်းနိုင်သော အလှအပဆိုင်ရာ အာနိသင်များ
ရှောက်သီးကို အလှအပအတွက် သဘာဝအိမ်သုံး ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(၁) ဆံသား တောက်ပြောင်စေတယ်။
ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ ဆံသားအနှံ့ကို ရှောက်ရည် တစ်ဆနဲ့ ရေတစ်ဆ ရောထားတဲ့ အရည်ကို လိမ်းပါ။ မိနစ် အနည်းငယ် ထားပြီးနောက် ရေနဲ့ သန့်စင် ပေးပါက ဆံသားတွေ တောက်ပြောင် လှပစေပါတယ်။
(၂) မျက်နှာလိမ်း တိုနာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တယ်။
ရှောက်ရည်က ချွေးပေါက်တွေကို ကျုံ့စေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ရှောက်ရည် အနည်းငယ်ကို ဂွမ်းစ အနည်းငယ်နဲ့ တို့ယူပြီး တိုနာအဖြစ် သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါက မျက်နှာ အဆီပြန်တာကို သက်သာစေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လွှဲယိမ်းနိုင်သော တံတား
By miemiekhine 2957 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
လန်ဒန်အခြေဆိုက် McDowell+Benedetti အမည်ရ ဗိသုကာအဖွဲ့မှ ကြိုးစား ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး တစ်ဖက်သို့ လွဲယိမ်းနိုင်သော တံတား အဖြစ် လူသိ များစေခဲ့ ပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကျွန်း မြောက်ပိုင်း Yorkshire မှာ ရှိတဲ့ တံတား ဖြစ်ပါတယ်။ စတီး၊အလူမီနီယံတို့နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ယင်း တံတားကို အဖွင့်အပိတ် အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်ပြီး သင်္ဘောငယ်တို့ ဖြတ် သန်း ဖို့အတွက် တစ်ဖက်ကို စုစည်းပေးပါတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ဖက်ကမ်းကို ပြန်ဆက်ပြီး ပုံမှန်တံတား အတိုင်း ပြန်ဖြစ် စေပါတယ။် တံတားပေါ်မှာလည်း အပန်းဖြေ အနားယူဖို့အတွက် ဝရံတာဝန်း သဖွယ် ပြုလုပ်ထားပေးပြီး ကမ္ဘာ့ အလှဆုံး မြစ်ကူး တံတား အဖြစ်လည်း မှတ်ယူကြ ပါတယ်။
By suwatisoe 2963 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
ရေသခွား ဆိုလို့ စားရတဲ့ သခွားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပင်လယ်မျော့ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြိး Sea cucumber လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်က ငါးရှဉ့်လို ပျော့ပြောင်းပါတယ်။ အရွယ်အားဖြင့် လက်မ ၂၀ အထိ ရှည်နိုင်ပြီး ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှာ နေထိုင်တဲ့ သတ္တဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ထူးခြားချက်ကတော့ စအိုကို ပါးစပ်လို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ပါးစပ်ပေါက်ပါပေမယ့် အင်မတန်ကျဉ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါက် နှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို ရေကနေယူပါတယ်။ ယူပုံယူနည်းကတော့ သူ့ရဲ့  Anus မှ ကြွက်သားနဲ့ ရေညစ်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို ရရှိပါတယ်။ ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ Sea Cucumber မျိုးများဟာေ
By aungaung 2971 days ago on ဗဟုသုတ from www.maukkha.org
ကလေးတွေက ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ သင်ပြ သွန်သင်သလို သူတို့လိုက်နာ နာခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖြေးဖြေး အသက်အရွယ် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ သွန်သင်လို့ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခါတိုင်း ကလေးငယ်တွေနဲ့ စကားပြောချိန်မှာ ကိုယ့်ပြောတဲ့စကားမှာ ဘာအဓိပ္ပာယ်ပါသွားသလဲ? ကိုယ့်မျက်နှာထားက ဘယ်လိုလဲ? ကလေးငယ် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? စတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုတဲ့စကားတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် မယုံနိုင်တဲ့ အပြောအဆို၊ အသုံးအနှုန်းတွေလည်း ပါလာတတ်ပါတယ်။
By yeaungnaing 2976 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
သိပ္ပံပညာအရ လေ့လာတွေ့ရှိထားခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ Falling in Love လို့ ခေါ်တဲ့ ချစ်စိတ်ဝင်နေခြင်းက ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ စိတ် ကို တည်ငြိမ်စေ ပါသတဲ့။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ဦးနှောက် အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်ကို ပိုမို မြန်ဆန်စေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ချစ်စိတ်ဝင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်မှာ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော မှတ်ဥာဏ် ကို တိုးမြင့်စေသော ဟိုမုန်းများ သာမန်ထက် ထွက်ရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက်မှာ ဆဲလ်အသစ်များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး မှတ်ဥာဏ်ကောင်းမွန် စေခြင်း၊ တည်ကြည်ရင့်ကျက်စေခြင်း၊ အတွေးအခေါ် သစ်များ ထွက်ပေါ်စေခြင်း အစရှိသဖြင့် ကောင်းကျိုးများစွာ ဖြစ် ထွန်း စေ ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ Network Engineer ကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးမည့် RHC
By YaminThu 2996 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
Singapore နိုင်ငံမှာ Professional Networker သမားတစ်ယောက် အဖြစ် အာမခံချက်ရှိရှိ အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန်၊ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနိုင်သော Real Network Engineer သမား တစ်ယောက်အဖြစ် ခိုင်မာသည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန် စာတွေ့လက်တွေ လမ်းညွန် သင်ကြားပေးနေသော RHC Technologies ဖြစ်ပါတယ်။
Network သမား တစ်ယောက်အဖြစ် အမှန်တကယ် ရပ်တည်နိုင်ရန် စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးနေရုံသာမက အလုပ်အကိုင် ရရှိစေရေးအတွက်ပါ အာမခံချက်ဖြင့် လမ်းညွန်ပြသပေးလျှက် ရှိပါတယ်။
RHC ကို Singpore မှာ လက်ရှိ Fulltime Senior Network Engineer အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်ဝင် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား Professional များမှ စတင် စုစည်း တင
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုစကာမြို့ မှာ တည်ရှိတဲ့ ၁၆ ထပ်တိုက်ဖြစ်ပြီး Gate Tower Building လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်က ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၅ထပ်၊ ၆ထပ်၊ ၇ထပ် စတဲ့ အထပ် သုံးထပ်ကို ဟိုင်းဝေးကားလမ်းဖောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဓာတ်လှေကားစီးရင် ယင်းအထပ်တွေကို အလိုအလျောက် ကျော် သွားပါတယ်။ ခေါင်မိုးမှာ ရဟတ်ယာဉ် ကွင်းလည်း ထားရှိထားပါတယ်။
ဟိုင်းဝေးလမ်း ကြောင့် တိုက်တုန်ခါမှု၊ အသံဆူညံမှု မဖြစ်အောင် အထပ်ပေါင်း များစွာ ခံထားပါတယ်။ ပြီးတော့ တိုက်တစ်ခုလုံးကိုလည်း double core -နှစ်ထပ် ပြုလုပ် တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
By eieilwin98 3007 days ago on ဗဟုသုတ from www.myawady.com.mm
မကြာသေးမီ အချိန်များက သောကြာဂြိုဟ် ပေါ်တွင် အရှိန်ပြင်း လေမုန်တိုင်းကြောင့် လေပြင်းများ တဝေါဝေါ တိုက်ခတ်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရ၍ သိပ္ပံပညာရှင်များ အနေဖြင့် အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ် နေရကြောင်း သေသေချာချာ အဖြေရှာ မတွေ့နိုင် ကြသေးပေ။
ဥရောပ၏ သောကြာဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာရေး ဂြိုဟ်တု Venus Express ၏ အကဲခတ် လေ့လာမှု ပြုလုပ်ချက်များအရ သောကြာဂြိုဟ် ပေါ်ရှိ တိမ်တိုက် အထက်တွင် ရှိသောလေ၏ အရှိန်သည် တစ်နာရီလျှင် ၁၈၆ မိုင် (၃ဝဝ ကီလိုမီတာ)မှ တစ်နာရီလျှင်၂၄၉ မိုင်(၄ဝဝ ကီလို မီတာ)သို့ ခုန်တက် ကျော်လွှားသွားနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် ငါးခု
By sandarmoe 3022 days ago on ဗဟုသုတ from www.myawady.com.mm
၁။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် (အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု)
၂။ မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIT)
၃။ ကင်းဘရစ်ခ်ျ တက္ကသိုလ် (ဗြိတိန်)
၄။ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် (ဗြိတိန်)
၅။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် (ဘာကီလေ)
အခိုင်တွင်မပေါက် ပင်စည်တွင် ပေါက်သော ဘရာဇီးစပျစ်သီး
By cherrythet 3026 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
ဘရာဇီး စပျစ်လို့ခေါ်တဲ့ စပစ်ပင်တစ်မျိုးက ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ပါရာဂွေး၊ ဘိုလီဗီးယား၊ အာဂျင်တီးနား အစရှိတဲ့ နိုင်ငံများ ပေါက်ရောက်ကြီး ထွား ပါတယ်။
အရသာကလည်း စပျစ်နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ ခူးပြီးရင် ၂ ရက်၊ ၃ ရက်လောက် ပဲ ခံတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားရတဲ့ အသီးများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်အနေနဲ့ လည်း ကျိုချက်၊ ကြိတ်၊ဖျော်လို့ သောက်သုံးပါတယ်။ ဘရာဇီး စပျစ်ခြောက် နဲ့ အခွံကိုလည်း ဆေးအနေနဲ့ အသုံးပြုပါသေးတယ်။
အပင်က အစေ့နဲ့စိုက်ရင် ၁၀ နှစ်လောက်နေမှ အသီးသီးပြီး ပျိုးပင်နဲ့ စိုက်ရင်တော့ ၅ နှစ်အတွင်း အသီးသီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှားပါး စပျစ် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စွယ်စုံသုံး သတ္တု ဂယ်လီယမ်နှင့် အနာဂါတ် ကမ္ဘာ
By marlarnyein 3043 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
လက်ပေါ်တင်ထားရင်ရင်တောင် အလိုလိုအရည်ပျော်လောက်အောင် သူ့ရဲ့  ဓာတု ဂုဏ်သတ္တိက ထူးခြားပါတယ်။ အခန်းအပူချိန် (၈၅.၆ ဖာရင်ဟိုက်) ထက် အနည်းငယ် ပိုလိုက်ရင် သူ့အလိုအလျောက် အရည်ပျော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ပေါ်တင်ထားရင် ကြိမ်းသေအရေ ပျော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ တစ်မျိုးထဲ သန့်သန့် အသုံးပြုလို့ မရပဲ အခြား သတ္တုများနဲ့ ရောစပ်အသုံးပြုမှု များပါတယ်။
အနာဂတ် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှာ ဂယ်လီယမ် နဲ့ အခြား ရှားပါးသတ္တုများ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လို ရှေ့ ဆက်မယ် ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ နည်းပညာမှာ ထိပ်တန်း ပြေးတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ သုသေတနလုပ်ငန်းနဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းများမှာ ရင်းနှီြး
By suwatisoe 3046 days ago on ဗဟုသုတ from www.maukkha.org
ကလေးကို စနောက်တယ်ဆိုတာ လူကြီးတွေက ကလေးရဲ့ရိုးသားခြင်းကို အသုံးပြုကို ကလေးကြောက်အောင်၊ အမှားလုပ်အောင်၊ ငိုယိုအောင် တမင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုပြုလုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လူကြီးကိုပျော်ရွှင်စေပေမယ့် ကလေးတွေအတွက် ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ကြောင့်ကြခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်းတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ပုဗ္ဗ ၊မုဉ္စ၊ အပရစေတနာ ဆိုတာ..
By marlarnyein 3046 days ago on ဗဟုသုတ from soethuhein.iblogger.org
ဒါနပြုရာ၌ ကျောင်းဆောက်မှု ၊ ဘုရားတည်မှု ၊ အလှူကြီးပေးမှု စသည်တို့ဖြင့် ကြီးကျယ်သော ဒါနလည်းရှိ၏ ။ ဆွမ်း ၊ သင်္ကန်း ၊ ဆေး
အစရှိသည်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ မရှိဆင်းရဲသားတို့အား စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှု စသည်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း အနည်းအပါး ဒါနလည်းရှိ၏ ။
ထို့တွင် ကြီးကျယ်သော ဒါနတို့၌ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် အတွက်ဖြစ်စေ ၊ သူတစ်ပါးတို့လာရောက် နှောင့်ယှက်သောကြောင့် ဖြစ်စေ
စေတနာပျက်ဖွယ်တွေ (စိတ်ထားမတက်သူ ၊ ဥာဏ်မရှိသူမှာ) များလှ၏ ။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့ ဒါန အကြီးအကျယ် လှူရာ၌ မိမိကိုယ်တိုင်
စွမ်းနိူင်သမျှ စဉ်းစားရုံသာမကဘဲ မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတို့နှင့် တိုင်ပင်ကာ ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းများကို ရွေးချယ်၍ပြုလုပ်ထိုက်ကြပေသည်။
By yeaungnaing 3054 days ago on ဗဟုသုတ from www.myawady.com.mm
By YaminThu 3056 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
မန်မာပြည်မှာတော့ အဲ့လောက်သိပ်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံ တွေမှာတော့ နည်းပညာ ပစ္စည်းများကို အလွန်အမင်း စွဲလမ်းနေကြပါပြီ။
မူကြိုစတက်မယ့် ကလေးငယ်တောင် iPad တစ်လုံးနဲ့ ဂိမ်းဆော့တာကို ဝါသနာထုံတာမျိုး ပြည်ပ မှာ လက်တွေ့ သိမြင်နေရ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လို လက်ဘက်ရည်ဆိုင် မရှိတဲ့ နိုင်ငံများမှာ အချင်းချင်း ထိုင်စကားပြောဖို့ထက် စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးနဲ့တင် အလုပ်နေကြတာ သူတို့ လူငယ်တွေ အလေ့အထပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ပြည်တွင်း မှာလည်း ရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းတဲ့ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း၊ အိုင်တီ ပစ္စည်းများအား အလွန်အမင်း သုံးစွဲမှုက အထီးကျန်ရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားရစေပါတယ်။